ILIFE H70, nadiifiyaha faaruqinta ee aan xadhigga lahayn ee aad raadinaysay | Wararka Gadget
ILIFE H70, nadiifiyaha faaruqinta ee aan xadhigga lahayn ee aad raadinaysay
Rafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | General, Guriga
Waxay u muuqataa in "moodada" nadiifiyeyaasha faaruqinta madaxbannaan ay tahay waxoogaa tallaabo ah, ama maya. Laakiin isku mar bay ubaxayaan noocyada kale ee nadiifiyeyaasha faaruqinta oo laga yaabo inay bixiyaan khibrad la isku hallayn karo nadiifinta guriga. Way iska caddahay in kuwa nadiifiyuhu waawayn ee waaweyn oo leh fiilooyin aad u dheer ay taariikhda galeen. Waxayna isku dhisaan suuqa Nadiifiyaha faaruqinta ee xadhkaha lahayn. Maanta waxaan ka hadleynaa ILIFE H70.
Fikradda nadiifiyeyaasha faaruqinta kuwa aan ku kalsoonayn in gaadhi yar oo oval ahi neefsado qoto dheer gees walba oo guriga ah. Ma aha in la xuso farqiga awoodda oo laga heli karo inta u dhaxaysa nooca «conga» iyo nadiifiyaha faaruqinta gacanta. Dad badan, qalab aad uga fiican si aad u hesho nadiifin aad u qoto dheer oo ah qayb kasta oo ka mid ah gurigeena ama xafiiskayaga.
1 ILIFE H70 xalka nadiifinta guriga
2 ILIFE H70 ee gurigaaga
ILIFE H70 xalka nadiifinta guriga
Haddii aad jeceshahay inaad ku raaxaysato a jawi nadiif ah guriga oo aad ka welwelsan tahay nadiifinta, waxaa muhiim ah inaad hesho caawimaad intii suurtogal ah. Waxaa ka mid ah fursadaha aan dhammaadka lahayn ee aan maanta ka heli karno suuqa aan ka hadli doono ILIFE H70, nadiifiyaha faakuumka bilaa wireless, isku -dhafan oo leh awood ka badan ku filan. Waxaan ka helnaa gogo 'iyo agabyo kala duwan oo dusha iyo meel kasta oo guriga ah.
Qabso isaga Nadiifiyaha faaruqinta ee ILIFE H70 qiimaha ugu fiican
Iyadoo ku xiran wasakhda iyo nooca dusha aan isticmaali karno laba nooc oo ah awoodaha wax nuugista. Awoodda caadiga ah, oo noo adeegta xaalad kasta oo leh awood nuugid 10 Kpa. Ama waxaan kicin karnaa habka máximo kaas oo aan ku heli doonno awood nuugid oo ka badan labanlaab 21 Kpa, si aysan jirin habaas boodh ah oo la iska caabbiyo.
Waad ku mahadsan tahay matoor burush xoog badan leh waxaan ku heli doonnaa dhammaan awoodda loo baahan yahay sida ugu aamusan. Tiri hal weel wasakh ah oo si sahlan u madhan oo leh awood dhan 1,2 litir. Oo dhan qaybo waa la saari karaa oo waa la dhaqi karaa xataa mashiinka weelka. Qaabkeeda dheer iyo gacan -ku -haynta ergonomic -ka ayaa noo oggolaanaysa inaan si fiican u faaruqinno sagxadda, laakiin sidoo kale dusha sare ama xitaa saqafka.
ILIFE H70 ee gurigaaga
Mid ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah ee lagu xisaabtamayo markaan rabno inaan helno nadiifiyaha faaruqinta waa madaxbannaanida ay awood u leedahay inay na siiso. ILIFE H70 waa ku qalabaysan 2500mAh batari. Lacag noo oggolaan doonta adiga isticmaalka joogtada ah ilaa 40 daqiiqo hab “caadi ah”. Oo maxaan haysan karnaa 1% ayaa mar labaad lagu soo oogay wax ka yar 5 saacadood.
ka qalabka nooc kasta oo nadiifin aha, iyo sidoo kale jilicsanaanta madaxdiisa oo lagu daboolay alaabo aan waxyeello u geysan alaabta guriga ama derbiyada ayaa ka dhigaysa aaladda ugu dambaysa. Dubo ilaa 180 darajo iyo in kuraasta ama lugaha miiska aan laga tagin nijaas. Xataa way leedahay iftiiminta nalalka LED -yada ee geesahaas oo leh aragti liidata.
Hadday tahay ILIFE H70 nadiifiyaha faaruq-gacmeed ee aan xadhig lahayn waa waxaad raadinaysay ka dhig adiga qiimaha ugu fiican Aliexpress iyada oo aan la bixin kharashyada maraakiibta. Ha sugin mar dambe gurigaagu inuu u ekaado mid nadiif ah oo u qalma. Oo waxay leedahay qalabka nadiifinta ugu dambeeya adigoon ku bixin kharash ka badan intii loo baahnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » ILIFE H70, nadiifiyaha faaruqinta ee aan xadhigga lahayn ee aad raadinaysay
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, falanqaynta qiimaha iyo astaamaha
Huawei FreeBuds 4, turxaan -bixinta badeecad ku dhowaad kaamil ah [Dib u eegis]